Wararkii ugu danbeeyay weerarka Brussels - BBC News Somali
Halkan kala soco wararkii ugu danbeeyay qaraxyada Brussels
17.11 Masawir si aad ah loogu daabacay warfaafinta Belgium, ayaa la sheegayaaa inuu muujinayo saddex nin oo la aaminsan yahay inay ka danbeeyeen weerarka gegida dayuuradaha ee Zaventem. Labada nin ee dharka madow qaba ayaa la aaminsan yahay inay is qarxiyeen. Halka ninka kale ee dharka cad xiran uu fakaday.
16.56 Gagida diyaaradaha ee Brussels ayaa xirnaan doonto bari, madaxa Shirkadda gagida diyaarada Arnaud Feist ayaa Reuters u sheegay.
16.34 Hogaamiyayaasha Midowga Yurub ayaa si wada jir ah uga soo saaray hadal weerarka:
"Midowga Yurub ayaa u murugoonaysa dadkii ay saamaysay weerarkii argagixiso ee Brussels. Wuxuu ahaa weerar lagu qaaday bulshada dimoqraadiga ee fur furan.
"Hayadaha Yurub ee aan wadaagno ayaa ku yaala Brussels, waxaan u mahadnaqaynaa dowladda iyo dadka reer Belgium.
"Midowga Yurub iyo dowladaha ku jira ayaa si adag u garab istaagaya iyagoo taageeraya, ayna ka go'an tahay inay si wada jir ah qatarta uga hor tagi doonaan sidii loo baahdo.
"Weerarkii ugu danbeeyay ayaa sii adkaynaya oo kaliya sida aan u difaaci lahayn waxa Yurub ay u taagan tahay. Waan ku midoobi doonaa si adag la dagaalanka nacaybka, dagaalka xagjirnimda iyo argagixisada".
15.38 Kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ee IS ayaa sheegatay inay ka danbaysay weerarka Brussels, war ay ku soo saartay wakaalada wararka ee Amaq.
Yvan Mayeur, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in 17 qof ay dhaawac culus yihiin.
Warfaafinta Dowladda ee VRT ayaa sheegtay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen labada weerar ee garoonka iyo saldhiga tareenka.
Waxay qortay: "Qaylada way socotaa. Waxay ka imaanaysaa meel walba, iyadoo jidka maraysa.
"Baabuurta gurmadka, dabdamiska, boliiska, baabuurta aan calaamada wadan ayaa qaylinaya markay marayaan wadada.
"Dadka ayaa istaagaya, fiirinaya iyadoo yaaban: indhahooda ayaa waxba muujinayn.
"Waxay og yihiin in ay run tahay. Waxay kaloo og yihiin inay ogaayeen: inay dhacayso.
"Waa calool xumada guud ahaan waxa aan la qiyaasi karin."
12.00 Ra'iisal wasaaraha Belgium Charles Michel ayaa sheegay inay jirto dhimasho iyo dhaawac badan.
Isagoo ka hadlaya shir jaraa'id wuxuu xaqiijiyay weerarka garoonka in qof uu is qarxiyay.
Raiisalwasaaraha Belgium ayaa ugu yeeray weerarka "dagaal gurracan oo indha la'aan ah oo si fuleynimo ah loo fuliyey".
Wuxuu ugu baaqay dadka reer Belgium inay muujiyaan "dagaanaan iyo taageero".
10.40 Madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyay weerarka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyay waxa uu ugu yeeray "fal waxashnimo" waxa ka dhacay Brussels, wakaalada wararka Interfax ayaa tabisay, iyadoo soo xiganaysa xoghayihiisa warbaahinta Dmitry Peskov.
"Madaxweynaha ayaa cambaaraynaya falkan waxashnimada, wuxuuna tacsi u dirayaa dadka reer Belgian, wuxuuna u balanqaaday taageero Boqorka Philippe dadka reer Belgium waqtigan adag."ayuu yiri Mr Peskov.
Lahaanshaha sawirka VRT
Guud ahaan dhimashada ayaa ah in ka badan 30.